शैलेश श्रेष्ठ, (न्यू योर्क, न्यू योर्क)
सबै खाले दर्शन र वादभित्र अत्यन्त शाश्वत रुपमा चलायमान रहेको जीवनवादको दर्शन र यसको गतिशीलता मलाई मन पर्ने स्वदर्शन हो । जीवनको शाश्वत र सार्थक पक्षमा न कुनै आडम्बर छ न कुनै पुरातन तर्क । त्यसैले जीवन र जगतलाई त्यहि रुपमा बुझेकोले म कहिलेपनि कुनै जडसुत्रवादी मनोगत राजनैतिक दर्शन धार या पुरातनिक अतिवादी धार्मिक उ 70-459 exam पदेशहरुबाट परिचालित भईन । \_'मेरो धर्म, मेरो जाति\_' भनेर अरुलाई हियाउने र होच्याउने अल्प चेतनाले मेरो मानव मनमा कहिल्यै घर जमाएन ।
स्कूले जीवनमा जानी नजानी पढेको मार्क्स, लु सुन अनि गोर्किका केहि पुस्तकहरुले मलाई धार्मिक रुपमा नास्तिक तर व्यावहारिक रुपमा जीवनवादी बनाएछ । समाजमा सकेसम्म सबैकालागी काम गर्ने, सबैको प्यारो हुने लोभ ममा थियो जुन अद्यापि कायमै छ । पुर्व चार नँ. 70-456 भोजपुर माझ किराँतमा जन्म भई आफ्नो स्कूले जीवन त्यहि पर्वते सँस्कारमा व्यतित गरेकोले होला शायद नेवारको छोरो भएर पनि कहिल्यै जातीय या भाषिक सवालमा \_'मेरो जाति\_' या \_'मेरो भाषा\_' भनेर वकालत गर्नुपर्ने आवश्यकता नै परेन । अत्यन्त महँगो नेवारी सँस्कारका कारण आफ्नो झिटि गुण्टा बोकेर भक्तपुरबाट ताप्लेजुङ्ग र पाँचथरको दोभान हुँदै हाम्रा जिजुबाजे जीवन यापनका क्रममा भोजपुर जिल्लाको दाँवा बजारमा आईपुग्नु भएको तथ्य कथा हाम्रा बाजेले हामीलाई एकादेशमा… को शैलीमा सुनाउनु हुन्थ्यो ।
बाजेकै पालादेखि हामी पर्वते सँस्कार अझ मतवाली सँस्कारमा समाविष्ट थियौँ IBM 000-011 dumps । अब बाजेकै पालादेखि नबोलिएको नेवारी भाषालाई मेरो मातृभाषा भनेर आडम्बर पालिरहनुको पनि के अर्थ रह्यो र ?
माझ किराँतको स्कूले वयस्क जीवनमा \_'कोक्चासी बानाने है जेठा\_' (राई भाषामा खाना \_'खान आईज है जेठा\_') भनेर साथीको आमाले स्नेहपुर्वक खाना खुवाएरमात्र पठाउने गरेको त्यो मीठो क्षण आज करीब २० वर्ष पछाडि सम्झँदापनि म रोमाञ्चित हुने गर्छु । भौतिक सुख सुविधाको यो भवसागरमा हामी त्यहि स्नेह, ममता, Cisco 700-039 आत्मियता र भाईचाराको अभावमा छटपटाई रहेका छौं । तर हिजो आज म सुन्दैछु पढदै छुँ हाम्रा गाउँघर र बस्तिहरु हिजोको जस्ता रहेनन् । हामी विचारका हिसावले क्षेत्र तथा वर्गका हिसाबले अनि रङ्ग र जातिका हिसाबले विभाजित भएका छौ । बहुलवादी सामाजिक र राजनैतिक सँरचनामा स्वस्थ वैचारिक विभाजन हुनसक्छ । अर्ध सामन्ती सँस्कार भएको हाम्रो राष्ट्र् र समाजमा वर्गीय IBM 000-012 test चरित्र साह्रै पुरातनिक सँरचना हो तर जातिय व्दन्द र विभाजन कसको र कुन वर्गको स्वार्थकोलागी हो त्यो बुझ्न र ठम्याउन अब हामीले ढिलो गर्नु हुँदैन ।
हाम्रो मातृभूमि अतिवादी बन्दुकेहरुबाट प्रताडित छ । हामी जानी नजानी नयाँ नयाँ युद्ध सरदारहरु जन्माउँदै छौं । बन्दुक र गोला बारुदलाई शक्तिको रुपमा परिभाषित गर्ने कुचेष्टा भई रहेको छ । दण्डहिनता हिजोका दिनहरुमा जस्तै मौलाएको छ । गोईत, ज्वाला सिह, टाईगर र कोब्रा जस्ता सशस्त्र दलहरु जन्मदो छन् । यस्ता क्रियाकलापहरुलाई समयमै कानुनी राज्यको दायराभित्र ल्याएर कारवाही गर्ने साहस भोली बन्ने नयाँ सरकारले पनि best replica rolex गरेन भने आतङ्कवाद र विखण्डनको अभिलाषा बोकेर नयाँ बन्दुके सँगठनहरु जन्मने छन् ।
विश्वभूमण्डलिकरणका प्रभावका कारण प्रत्येक सँघ सँगठन र समुदाय अत्यन्त चलायमान अवस्थामा छन् । हामी विश्वको जुनसुकै कुनामा रहेपनि वर्तमान नेपाली राजनैतिक र सामाजिक घटनाक्रमबाट टाढा र निरपेक्ष रहनै सक्दैनौ । यस अर्थमा अहिलेको हाम्रो एकमात्र सरोकार र एजेण्डा भनेको आगामी चैत्र २८ गते हुने ऐतिहासिक सँविधान सभाको निर्वाचन नै हो । सबै खाले प्रतिगामी र प्रतिक्रियावादीहरुको साँठगाँठ र विरोधका वावजुदपनि शान्तिकामी तथा स्वाधिनताप्रेमी नेपाली जनताको चाहना र बलका कारण सँविधान सभाको निर्वाचन निश्चित प्रायः छ 2014 latest CISSP questions । ईतिहासको लामो कालखण्डमा नेपाली जनताले गरेका विभिन्न चरणका आन्दोलनहरुलाई हामीले प्रसव वेदनाका रुपमामात्र परिभाषित गर्नुपर्दछ । यो लामो वेदनापछि अब राजनैतिक ईतिहासमा २३९ वर्ष लामो सामन्तवादी निरङ्कुश राजतन्त्रको पटाक्षेप हुनेछ ।
अबको १३ दिनपछि हुने सँविधान सभाको चुनावमा मतदान गर्न म कल्पनामा मेरो जन्मथलो भोजपुर पुगेको छुँ । फ्ल्यास ब्याकमा उहि मेरो प्रिय साथी धनपालकी आमाको \_'कोक्चासी वानाने है जेठा\_' भन्ने प्रिय वचन प्रतिध्वनित भई रहेको छ । यो आलेख तयार पारिरहँदा म सँघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको परिकल्पनामा निर्लिप्त भएको छुँ । कुन दलले कति सिट जित्छ भन्ने सवाललाई गौण मान्दै लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिकका cheap fake burberry bags पक्षधरहरुलाई जिताउनु पर्ने चुनाव हो यो । अबको २४ दिनमा विधिवतरुपमा सँविधान सभाका सभासदहरुले अत्याधिक बहुमतले सँघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल को उधारो घोषणालाई अनुमोदन गर्नेछ । शायद त्यो ऐतिहासिक दिन पनि शुक्रबार नै पर्ने छ । स्मरण रहोस् तत्कालिन मन्त्रीपरिषदका स्वघोषित अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र शाहले प्रत्येक जनविरोधि कर्म गर्न शुक्रबार नै रोजेका थिए । अब उनको त्यहि प्रिय दिनमै २३९ वर्षिय शाह वँशीय विरासतको वैधानिक अन्त्येष्टि हुने छ ।
शहरभरि खुशीयाली छाएको छ । यत्रतत्र मानिसको उल्लासमय चहलपहल छ । टुँडिखेलमा सँयुक्त रुपमा घोषणा सभा आयोजना गरिएको छ । अब जनसभालाई सम्बोधन गर्ने पालो हाम्रा वयोवृद्ध सम्माननीय गणतन्त्रवादी प्रधानमन्त्री श्री गिरिजा प्रसाद कोईरालाज्यूको छ । म अनायास र अचानक २०४६ सालको घोषणा सभामा फर्कन्छु र त्रसित हुन्छु कतै यसपाली पनि \_'यो जित पँचकोपनि हो र राजाकोपनि हो\_' त भन्नुहुने हैन ? यो मनोगत त्रासबाट उन्मुक्ति पाउन म भाषण नै नसुनी सरासर अगाडि बढ्छु । मेरो ठिक अगाडि चट्टान जस्तै अविचलित विचार भएका सम्पुर्ण नेपालीका महान नेता गणेशमान सिहँको १२ फिट अग्लो शालिक ठिङ्ग उभिएको छ म सहृदय ससम्मान सलाम गर्छु र मनमनै भन्छु \_'आज तपाई र मनमोहन अधिकारीको सपना पुरा भएको छ । सँयुक्त आन्दोलन मार्फत सँघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापना भएको छ ।